Messier 32 - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 00h 42m 41.8s, 40° 51′ 55″
ဘဲဥပုံစံ အရံဂယ်လက်ဆီ M32
00° 42′ 41.8″
-၂၀၀ ± ၆ km/s
2.49 ± 0.08 မီလီယံ အလင်းနှစ် (763 ± 24 kpc)
အင်ဒရိုမီဒါ ဂလက်ဆီ ၏
M 32, NGC 221, UGC 452, PGC 2555, Atlas of Peculiar Galaxies 168, LEDA 2555
အင်ဒရိုမီဒါ ဂယ်လက်ဆီ (အပေါ်ပုံ) M32 (အလယ် ဘယ်ဘက်)
Messier 32 (NGC 221 နှင့် Le Gentil ဟုလည်းသိထား) သည် ဘဲဥပုံစံ အရံဂယ်လက်ဆီဖြစ်ပြီး ကြယ်စုတန်း အင်ဒရိုမီဒါမှ အလင်းနှစ် ၂.၆၅ မီလီယံအကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ယင်းသည် အင်ဒရိုမီဒါ ဂယ်လက်ဆီ၏ အရံဂယ်လက်ဆီဖြစ်ပြီး ၁၇၄၉ ခုနှစ်တွင် Le Gentil ဆိုသူမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ M32 သည် အချင်းအားဖြင့် အလင်းနှစ် ထောင်ပေါင်း ၆.၅ ± ဝ.၂ ခန့်သာ ကျယ်ပြန့်သည်။ M32 တွင် သက်တမ်းရင့် မှေးမိန်သော ကြယ်နီများနှင့် ကြယ်ဝါများ အများစုပါဝင်ထားပြီး ဖုန်နှင့်ဓာတ်ငွေ့များ မပါဝင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ကြယ်တာရာ မွေးဖွားမှုလည်း မရှိပေ။ သို့သော် မကြာသေးခင်က နှေးကွေးသော ကြယ်ဖွဲ့တည်မှု သဲလွန်စကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ M32 သည် အရံဂယ်လက်ဆီဟု ဆိုထားသော်လည်း အချို့ကမူ ပုံမှန်ဂယ်လက်ဆီတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်ဟု အကြံပြုထားသည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - တွင်းနက်
M32 တွင် အင်မတန်ကြီးမားသော တွင်းနက်တစ်ခု တည်ရှိသည်။ ယင်းသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် နေထုထည် အဆပေါင်း ၁.၅ မှ ၅ သိန်းအထိ ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
"StarDate: M32 Fact Sheet" Archived 22 July 2011 at the Wayback Machine.
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ ၁.၇ ၁.၈ NASA/IPAC Extragalactic Database။ Results for NGC 221။ 2006-11-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ SIMBAD-M32။ SIMBAD Astronomical Database။ 2009-11-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Armando, Gil de Paz (2007). "The GALEX Ultraviolet Atlas of Nearby Galaxies". Astrophysical Journal Supplement 173 (2): 185–255. doi:10.1086/516636. Bibcode: 2007ApJS..173..185G.
↑ Kepple၊ George Robert; Sanner, Glen W. (1998)။ The Night Sky Observer's Guide။ Vol. 1။ Willmann-Bell။ p. 17။ ISBN 0-943396-58-1။
↑ Rudenko, Pavlo (2009). "Intermediate age clusters in the field containing M31 and M32 stars". The Astronomical Journal 138 (6): 1985–1989. doi:10.1088/0004-6256/138/6/1985. Bibcode: 2009AJ....138.1985R.
↑ Valluri, M. (2004). "Difficulties with Recovering the Masses of Supermassive Black Holes from Stellar Kinematical Data". Astrophysical Journal 602 (1): 66–92. doi:10.1086/380896. Bibcode: 2004ApJ...602...66V.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Messier_32&oldid=623134" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။